Khudaarta | December 2019
Ugu Weyn Ee Khudaarta
Jucchini qalajinta guriga: sida loo diyaariyo jiilaalka, waxa laga samayn karo
Zucchini waa badeecad cunto qiimo leh oo leh fitamiin badan oo hodan ah iyo dhadhan fiican. Waxay noqon doontaa mid lagama maarmaanka u ah cuntadaada, haddii aad doorbido raashinka caafimaadka leh iyo midda wanaagsan. Run ahaantii, zucchini badan oo cusub ayaa la cuni karaa oo kaliya xilliga xagaaga, si ay ugu raaxaystaan ​​dhadhanka cuntada khudradda sanadka oo dhan, hooyooyinka intooda badani waxay u arkaan inay diyaar u yihiin: khudaarta qasacadaysan iyo salad, marinades iyo xitaa xakamaynta zucchini.
Sidee iyo waxa khudaarta loo qalajin karo xilliga jiilaalka
Fayoobaanta fitamiinada dabiiciga ahi waxay si ba'an u saameeyaa jirka bini'aadamka xilliga qaboobaha. Cagaar la'aan, khudaarta cagaaran iyo miraha cusub waxay keenaysaa daciifinta nidaamka difaaca jirka, vitamin yaraanta iyo khatarta sii kordheysa ee qandaraaska cudurrada ARVI. Si kastaba ha ahaatee, teknoolojiga casriga ah ayaa suurtagal ah, xitaa xilliga qaboobaha, si aad u hesho tiro ku filan oo ka mid ah waxyaallaha waxtarka leh - tusaale ahaan, miraha la qalajiyey.
Khudradda kala duwan ee xilliga qaboobaha: 3 super-fast-recipes
Haddii aad jeceshahay cuntada qasacadaysan, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay dhibaatada aad u dooratid qashin aad u furan maanta, waxa aad jeclaan lahayd in ka badan - qajaarka ama yaanyada, taas oo khudradda ay si fiican u la socdaan baradhada (badarka, baastada, iwm.). Si loo baabi'iyo, waxaad diyaarin kartaa xeedho, adoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo khudaar ah.
Waa maxay casiirada khudradda ah iyo sidee ayay wax u tarayaan?
Casiirka cusubi waa bilaw weyn maalinta. Ugu yaraan waa aragtida guud ee la aqbalo. Cabitaanadani waa kuwo aad u iftiimaya, dhadhan fiican leh, caafimaad leh, oo caafimaad leh, oo ku raaxaysanaya dhadhanka - waxaan ku faraxsanahay inaan ku darno cuntadaada waxaanan tixgelineynaa doorashada saxda ah. Si kastaba ha ahaatee, saynisku weli ma istaagayo, barashadu waxay ku andacoodeen in wax waliba aysan ahayn mid fudud.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudaarta 2019